Umsebenzi wethu - iSichuan Yinye Medical Technology Co., Ltd.
Kunikelwe Futhi Kuyagcinwa
Isibopho sabantu, umphakathi kanye nemvelo
Namuhla "ukubophezeleka kwezenhlalo" yizindebe ezishisayo emhlabeni wonke. Kusukela kwasungulwa inkampani ngo-2010, kwaYinye isibopho sabantu nemvelo kudlale indima ebaluleke kakhulu, obekuhlala kukhathaza kakhulu umsunguli wenkampani yethu.
Njalo Ukubalwa Komuntu Ngamunye
Isibopho sethu kubasebenzi
Imisebenzi Ephephile / Ukufunda Okuphila Impilo Yonke / Umndeni Nomsebenzi / Impilo futhi kufanelekile kuze kube umhlalaphansi. E-Yinye, sibeka inani elikhethekile kubantu. Abasebenzi bethu yibona abasenza inkampani eqinile, siphathana ngenhlonipho, ngokwazisa nangokubekezela. Ukugxila kwethu kwamakhasimende okuhlukile nokukhula kwenkampani yethu kwenziwa kuphela ngalesi sisekelo.
Isibopho sethu emvelweni
Imikhiqizo esindisa amandla / Izinto zokupakisha zemvelo / ezokuthutha ezisebenza kahle
Kithina, vikela izimo zokuphila zemvelo ngangokunokwenzeka. Lapha sifuna ukufaka isandla emvelweni ngemikhiqizo yethu futhi ekukhiqizweni kwayo, abantu abaningi ngokwengeziwe bazosebenzisa izindwangu zethu ukwenza ngcono ukusebenza kwamandla kagesi ezakhiweni zehhovisi nezokuhlala.
Masithande imvelo; asijabulele ukukhanya kwelanga.
Ukukhululwa Komhlaba / Nikela Ngezinto Zokuvikela / Imisebenzi Yokunikela
U-Yinye uhlala enza umthwalo ohlanganyelwe ngezinkinga zomphakathi. Sibamba iqhaza ekulweni nobuphofu emphakathini. Ekuthuthukisweni komphakathi nasekuthuthukisweni kwebhizinisi uqobo, kufanele sinake kakhulu ukuqeda ubuphofu futhi sithwale kangcono umthwalo wokulwa nobuphofu.